प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाबीच अर्थपूर्ण भेटवार्ता | Nepal Ghatana
प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाबीच अर्थपूर्ण भेटवार्ता
प्रकाशित : १५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १२:४४
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाबीच भेटवार्ता भएको छ । आज बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा बालुवाटारमा ओली र शेखरबीच डेढघण्टा लामो भेटवार्ता भएको हो ।
नेकपा भित्र आन्तरिक किचलो बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काँग्रेस नेता डा शेखर कोइरालासँग भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै प्रधानमन्त्रीले डा कोइरालासँग गरेको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
पार्टीभित्र गम्भीर मोड उत्पन्न भइरहेको बेला ओलीले काँग्रेस नेता कोइरालाले भेटवार्ता गरेका हुन् । बिहीबार बिहान करिब डेढ घण्टा भएको भेटको शुरुमै कोइरालाले आफुले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ भनेको प्रसङ्गबाट उठाएका थिए ।
कोइरालाले भेटमा राष्ट्रिय राजनीति, बाँस्कोटा कमिसन प्रकरण, संविधान संशोधन, नेकपाभित्रको चलिरहेको आन्तरिक कलह र कांग्रेस पार्टीका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
कोइरालाले सरकारमाथि अनेकन प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिँदा उचित हुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । व्यक्तिको अनुहार हेरेर संविधान संशोधन गर्दा कुनै पनी बेला मुलुक दुर्घट्नामा पर्न सक्ने भन्दै त्यसो नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओली देशका बारेमा निकै चिन्तित देखिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र शेखरबीच भेटवार्ता भएको कोइरालाका सहयोगी दिनेश थपलियाले स्विकार गरेपनी डेढ घण्टाको भेटमा थप के के कुरा भयो भन्नेबारे केही बताउँन चाहेनन् ।
पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा सभापती लड्ने भन्दै देश दौडाहामा रहेका कोइराला र प्रधानमन्त्रीत्रीचको यो भेटघाटलाई निकै अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ।
माधवकुमार नेपाल पक्षले बोलाएको बैठक अनाधिकृत भन्दै ओली पक्षको आपत्ति
अझै एमालेभित्र एकताको सम्भावना छ ? के भन्छन् नेताहरु ?